Meel Marinta sharcigii xuquuqda ilmaha (UNCRC), muxuu ku soo kordhin doonaa xuquuqda ilmaha Soomaaliyeed? | Codka Shacabka Soomaaliyeed
Meel Marinta sharcigii xuquuqda ilmaha (UNCRC), muxuu ku soo kordhin doonaa xuquuqda ilmaha Soomaaliyeed?
10/02/2015 — Codka Shacabka Soomaaliyeed
Meel marinta heshiiskaan waxaa ka dhalanaya waajibaad badan oo laga rabo inay meel mariso dowladda Soomaaliya oo uu ugu horeeyo in heshiiskaas la meel mariyay la soo barbar dhigo sharciyo dowladeed oo iyaga loo sameeyay sidii ay dowladdu u qorsheyneyso inay u hirgeliso heshiiskan caalamiga ah ee ay sixiixday. Waxaa kaloo jira waxyaabo badan oo laga rabo in maamul ahaan looga arko shuruucda iyo qaab dhismeedka dowladda oo dhiirigelinaaya xuquuqda ilamaha, oo ay ugu horeeyaan in la dhiso guddiyo daba gala sidii loo dhaqan gelin lahaa heshiiskaan la sixiixay. Waxaa kaloo laga maarmaan ah in la sameeyo heyado dowli ah oo dhiirigeliya ilaalinta xuquuxda ilamaha, dowladduna ku bixiso miisaaniyad macquul ah si ilmuhu u helaan xuquuqda ku qoran heshiiska aan sixiixnay.
Ma rabo inaan wada magacaabo xuquuqda ilmaha ee ku qoran heshiiskaan caalamiga ah, runtiina laga helaayo dhaqankeenna islaamaka sida uu qoran buuga aan kor ka helaysaan, hadana waxaan rabaa inaan ka magacaabo dhowr si aan u fahanno baaxadda howsha u taalla dowladda Soomaaliya oo ka dhalaneysa heshiiska baarlamaanak Federaalku meel mariayay. Xaqqa nolosha, xaqqa nafaqada, xaqqa caafimadka, xaqqa waxbarashada, xaqqa nabadgelyada, xaqqa horumarinta, xaqqa cadaaladda, xaqqa fikrad ka dhiibashada waxyaabaha iyaga quseeya iyo kuwo kale aad u faro badan oo ku qoran 41kowda qodob ee ugu horeeya heshiiskaan caalamiga. Waxaana laga rabaa dowladda Soomaalaaiya inay soo saarto qoraal ay ku sharaxeyso sida ay wax uga qabatay xuquuqdaas ay ilmaha lee yihiin muddo labo sano ka dib maalintii ay sixiixday, markaas ka dibna shan sano kasta ayaa laga rabaa in si joogta ah ugu gudbiso guddiga qaramada midoobay ee ilaaliya xuquuqda ilmaha.
Soomaaliya waxaa laga rabaa inay u abuurto xafiisyo iyo heyado dowladeed oo ilaaliya xuquuqda ilmaha, oo ku yaalla tuulo, degmo iyo gobol kasta oo dalka ku yaalla iyagaas oo u tababaran qaabka ay tahay inay u meel mariyaan una ilaaliyaan xuquuqda ilmaha. Waxaa kaloo la rabaa wasaarad kasta oo uu quseeyo hal qodob oo ka mid ah qodobada uu heshiiskaan caalamiga ah ka kooban yahay inay ka fikirto oo ay weliba dedejiso sidii ay u hirgelin laheys qeytaas iyaga u aadan ilaalinta xuquuqda ilmaha.
In kasta oo aan aad u taageersanahay meel marinta ay Soomaaliya meel marisay heshiiskaan caalamiga ah ee xuquuqda ilmaha, waxaase ii muuqda inaan sixiixnay oo kaliya, oo aanan lagu baraarugsaneyn masuuliyadda la qaaday iyo sida loo rabo inaan ANNAGU aan uga soo dhalaalno masuuliyaddaas annagoo meesha ka saareyna in heyad dibadda ka imaaneysa ay qaban doonto masuuliyadda ka dhalaneyso heshiiskaan caalamiga ah ee aan sixiixnay. UNICEF, waxa ay taageeri doontaa oo kaliya sidii lagu gaari lahaa ujeedooyinka heshiiskaan, waxaana jiri doona dabagal oo dhowr sano ka dibba, waxaana la soo saari doonaa liis lagu soo qorayo wadamada xuquuqda ilmaha sida fiican u dhowra iyo kuwa aanan dowrin iyada oo sal looga dhigaayo heshiiska aan sixiixnay qodobadiisa, taas oo la rabo inaysan Soomaaliya ugu hooseynin.
Waxaan talo ku soo jeedinayaa in si deg deg ah loo sameeyo guddiga ilaalinta xuquuqda ilmaha Soomaaliyeed, oo iyagu u gacan bannaanaada sidii loo meel marin lahaa heshiiskaan iyo weliba sidii wasaaradaha iyo heyadaha masuuliyadda gaarka ah ay ka saaran yihiin qodobada heshiiskaan loo tusi lahaa masuuliyadda iyaga uga aadan hirgelinta sharcigaan, waana inay noqotaa abuuridda guddigaan mid si degdeg ah loo meel mariyo si ay u billaabato wax ka qabadka iyo ilaalinta xuquuqda ilmaha Soomaaliyeed.
Cabdixakiin C. Casir
Agaasimaha Waaxda Waxbarashada G/Banaadir
« Xalka kaliya ee haray, waa in Baarlamaanka la kala diro sida uu qabo qodobka 67aad ee dastuurka KMG ah.
Wasiiradda Waxbarashada DFS oo sheegtay in qaabka waxbarashada dalka loo maamulo ay wax weyn iska bedeli doonaan iyo wareysi aan arintaas ka wareysannay Agaasimaha waaxda waxbarashada G/Banaadir. »